Feysal Cumar Mushteeg (1940kii-2012ka) Qormada 6aad
“Duqii waran buu I dari gaadhoo,
Dirqaan ku baxsaday daraaddaayoo,
Deeqay maqal laysku keen diid,”
Halkanna jacaylkii ayaa kula fogaaday, oo muxuu yidhi:
Feysal Cumar Mushteeg (1940kii-2012ka) Qormada 5aad
Hadal-haynta Maalmahan: Tirsiga 30aad Xukun-daaddejintii u-xuub-siibatay Xadhig-daaddejinta
Waa ay isu boodday ma maqli jirteen. Waa hoggaankii halganka iyo horumarinta sheeganayay ka laga soo hoyan la’ yahay ee saxaafaddii madaxa-bannaanayd ku heerantay. Waxa looga taag la’yahay dhallinyaro da’ yar oo is-xilqaanatay oo ku shaqaysa duruuf aan cidina u adkaysan karin
Feysal Cumar Mushteeg (1940kii-2012ka) Qormada 4aad
Hal-hays wuxu u lahaan jiray sacabka ay reer Kuweyt tumaan oo runtii ka mid ah kuwa ugu quruxda badan adduunka. Habeen aanu aroos Gebilay ah joognay waqti aan u malaynayo in uu ahaa 1992kii ayaa wuxu igu yidhi: “Sacabka nin keliya oo reer Kuweyt ahi tumo, boqol Soomaaliyeed ma tumi karayaan.”
Feysal Cumar Mushteeg (1940kii-2012ka) Qormada 3aad
1963kii waxa waxbarasho xagga miyuusigga ah loogu diray magaalada Qaahira: Maryan Xaashi (Ammaano), Axmed Cali Haaruun (Dararamle), Feysal Cumar Mushteeg iyo Axmed Maxamed Good oo loo yaqaannay Shinbir.